Wax badan ka Ogow Qorshaha Farmaajo ee muddo kororsiga iyo waxa ka dhalan kara !. | Dalka Times - News and Politics
Home SO WARKA Wax badan ka Ogow Qorshaha Farmaajo ee muddo kororsiga iyo waxa ka...
Abdi Malik 48 mins ago
DEG DEG:Qeybo kamid ah Soomaaliya oo laga arkay bisha berina lagu dhawaaqay Ciidul Fidri
Madaxweyne Deni oo goor dhow ku dhawaaqay wasiiro cusub iyo wasiir ku-xigeeno&Yaa kamid noqday?
Ciidamada K/Galbeed oo gacanta ku dhigay Hub iyo Lacag Shilin Soomaali ah oo fara badan.
Francisco Madeira “Waa ku amaanan yahay Axmed Madoobe uu heshiis la gaaro, qaar ka mid ah dhinacyadii isaga ka soo horjeeday”.
Jonathan Allen “In sanadkan la qabto dooraasho qof iyo cod ah iyo dib u eegista Dastuurka Waa kuwa aan weli is-beddelin..”
DEG DEG:Qeybo kamid ah Soomaaliya oo laga arkay bisha berina lagu...
Wax badan ka Ogow Qorshaha Farmaajo ee muddo kororsiga iyo waxa...
Madaxweyne Deni oo goor dhow ku dhawaaqay wasiiro cusub iyo wasiir...